एमालेका निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचि « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १४ मंसिर । नेकपा (एमाले)को १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली सर्वाधिक मतका साथ विजयी हुनुभएको छ । उहाँले एक हजार ८३७ मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका प्रत्याशी डा भीमबहादुर रावलले २२३ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।
निर्वाचनमा दुई हजार १५३ मतमध्ये २०९६ मत खसेको थियो । यही मङ्सिर १० गते नारायणी नदी किनारमा सुरु भएको उद्घाटनको बन्द सत्र सौराहामा भएको थियो । निर्विरोध गर्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि आज बिहान ४ बजेदेखि विद्युतीय उपकरणमार्फत मतदान गरिएको हो । अन्य धेरै क्षेत्रका पदमा भने निर्विरोध भएको थियो । RSS
काठमाडौं, १२ माघ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवालीले घुस लिनेको अनुपातमा दिनेलाई कारबाही
काठमाडौं, १२ माघ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा
काठमाडौं, १२ माघ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले सय दिनको तयारीमा पनि स्थानीय
काठमाडौं, माघ १२। लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आएको भगवती लेमिनेट्स प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८
हेटौँडामा राष्ट्रियसभा चुनावको लागि सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न
हेटौँडा, ११ माघ: राष्ट्रियसभा चुनावको लागि त्यहाँको मतदान केन्द्रमा आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन
गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ट्रयापमा पार्न खोजेका छन्ः डा. शेखर कोइराला (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ११ माघ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने
काठमाडौं, ११ माघ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीसँग जित्न नसक्ने भएकाले सत्ता